Redmi Rịba 8 na 8 Pro Pro gosipụtara na August 29 | Gam akporosis
Ihe ngosi Redmi Rịba ama 8 na Nkọwa 8 Pro enweela ụbọchị ngosi ngosi
Izu ndị a anyị na-enwe ọtụtụ asịrị banyere Redmi Rịba ama 8 na Nkọwa 8 Pro. Ọ bụ ekwentị izizi nke ika China jiri igwefoto 64 MP, na eziokwu mbụ na ahịa. Bụrụ ụbọchị ole na ole ẹdụk ụbọchị ngosi, nke emesiri gosiputa ya n'onwe ya.
Ya mere, anyị amaworị mgbe ha mere, yana ịmara nke ahụ anyị nwere ike ịtụ anya ụdị abụọ na nke a. Ebe ọ bụ na Redmi Note 8 na Note 8 Pro ga-ewepụta ọnụ na mmemme a. Companylọ ọrụ ahụ n'onwe ya ekwenyelarị anyị mgbe ihe ngosi a ga-eme.
Ọ ga-abụ Ọgọst 29, dị ka a nụworo ya, mgbe a na-egosi Redmi Note 8 na Note 8 Pro. The Chinese ika ga-ahapụ anyị na ihe omume nke bukwanu mkpa. N'ihi na n'ime ya ka a na-atụ anya na a ga-eweta ya bụkwa Smart TV mbụ gị, dị ka o kwere omume ịmata n'izu a.
Na nkọwa nke ekwentị abụọ ahụ, e nwere ọtụtụ mkpọpu mmiri. Ma nke bụ eziokwu bụ na anyị amaghị ihe ọ bụla doro anya. Kedu ka ọ dị ọ ga - abụ ụdị nkịtị eji igwefoto 64 MP, mgbe ihe nlereanya Pro ga-enwe ese foto anọ azụ nke anyị hụworo ugbu a.
Ọ bụ ezie na nke a bụ ihe na-akwadobeghị ma. Ya mere, anyị ga-echere iji chọpụta nkọwa niile gbasara Redmi Note 8 na 8 Pro. Ekwentị abuo nke ndi China jiri megharia uzo a, nke bụ ihe ịga nke ọma na ahịa, dị ka anyị hụworo.
Ndi chere adighi kwa ogologo na nka. N'ime otu izu anyị nwere ike ịmata ihe niile na Redmi Rịba ama 8 na Nkọwa 8 Pro. Ọ bụ ezie na o doro anya na n'izu a, a ga-enwekwu nkwụsị, ma ọ bụ ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ikwenye ụfọdụ nkọwa gbasara ekwentị ndị a. N'okwu ahụ, anyị ga-agwa gị akụkọ kachasị ọhụrụ gbasara ha abụọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Xiaomi » Ihe ngosi Redmi Rịba ama 8 na Nkọwa 8 Pro enweela ụbọchị ngosi ngosi
Android na-agbakwunye nkewa nke njikwa maka Xbox Elite njikwa na USB